Ezinye iitshaja ezingenazingcingo ziphazamisa iCarKey. I-Apple ikhangela isisombululo | Ndisuka mac
Ezinye iitshaja ezingenazingcingo ziphazamisa iCarKey. I-Apple ikhangela isisombululo
UManuel Alonso | | iapile
U-Apple ubhalise ilungelo lomenzi elithetha ngetekhnoloji yeCarKey eguqula indlela osebenza ngayo xa iitshaja ezingenazingcingo zikufuphi. Okwangoku sinethuba lokuvula iingcango kunye nokuqala kweemoto ngaphandle kokufaka isitshixo naphina. NgeCarKey sinokusebenzisa iApple Watch ukuvula isithuthi.
"Uthintelo lokuNgenelela kokuNgenisa ngaphandle kweTlawulo" Yiyo patent Ibhaliswe yiApple ebonisa ukuba inkampani ifuna ukuthintela njani abanini beCarKey ekufumaneni ukuba abanakho ukuvula iimoto zabo.
Iinkqubo ezingenamsebenzi ezikude zivumela abasebenzisi ukuba basebenzise amaqhosha ukwenza izinto ezithile ezinokuthi zifuna ukusebenzisana kwethu. Ngokuphatha amaqhosha e-elektroniki asebenza kwiindawo zonxibelelwano ezingenazingcingo, ezi inokulawula ngaphandle kwentambo izitshixo zeminyango yezithuthi kunye nemisebenzi yocinezelo lwemoto.
Itshintshiwe nokuba ngabahlobo bomnye umntu, imigewu, okanye itshintshwe zezinye izixhobo ezisebenza kumgama ofanayo. Oko akuthethi ukuba ukuba sifumana ezinye izixhobo asinakho ukusebenzisa izitshixo zethu. Kodwa ukuba kunokubakho ukuphazamiseka kwaye kunokungasebenzi kakuhle. Asifuni loo nto nangaphantsi kwezixhobo ezivela kuApple.
Ngexesha lokudluliselwa kwamandla ngaphandle kwamacingo, iisimboli zamandla ezingenazingcingo zihanjiswa zisuka kwizixhobo zokuhambisa umbane ukuya kwiifekthi zokufumana. Ngexesha lomsebenzi wokudlulisa, kukho umngcipheko ukuba amandla ombane angenazingcingo avela kwiisekethi anokuphazamisana.
Isisombululo esicetywayo ngu-Apple kukufumana kuqala umngcipheko wokuphazamiseka emva koko uthathe amanyathelo okuphepha. Umbono kukuba okona kulungileyo umsebenzisi akunyanzelekanga ukuba azi ukuba kukho ingxaki enokubakho. Kwimeko embi kakhulu, uya kucelwa ukuba lungisa useto kwaye silungile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezinye iitshaja ezingenazingcingo ziphazamisa iCarKey. I-Apple ikhangela isisombululo
UBilly Crudup ukuba enze inkwenkwezi kuthotho lwe-Apple TV + "Molo ngomso"